Enye yezona ndawo ziHostoric kwiKhaya leParadesi iCowra - I-Airbnb
Enye yezona ndawo ziHostoric kwiKhaya leParadesi iCowra
Ikhaya elihle elinembali elibekwe entliziyweni yeCowra ephakathi kweziko ledolophu yaseCowra kunye neeGadi zaseJapan. Yiva imbali yeli khaya lihle kangaka lakudala ukusukela oko ufikayo.
Izuza kwiimbono zasentshona ngaphaya kweNtlambo yaseLachlan. Likhaya elikhulu elinobuqhetseba elinwenwe kumanqanaba amathathu anamagumbi amabini okuhlala amakhulu kunye namagumbi okulala amahlanu.
Ngaphaya koko, ikhaya linenkqubo yelanga kunye neebhetri zokunciphisa amakhaya ekhabhoni.
Eli khaya likhaya elidala elinamanqanaba amathathu kunye nendawo entle enamagumbi amaninzi azuza kwisilingi ephezulu.
Ngaphantsi kukho igumbi lokuhlala elingaqhelekanga elinendawo yokutyela neyokuhlala eneenkuni. Kwigumbi lokuhlala kukho ikhitshi nendawo yokuhlala, kumgangatho ofanayo kukho indawo yokuhlamba iimpahla ephandle negumbi leshawa. Kwinqanaba eliphantsi kukho igumbi elikhulu lokutyela eliziimitha eziyi-8.5, igumbi le-sun kunye namagumbi okulala amane aneebhedi ezinkulu ezintathu kunye negumbi elinye elineebhedi ezinkulu ezimbini ezinendawo yokuhlambela yosapho. Kwinqanaba eliphezulu kukho igumbi lokulala elinye elinebhedi enkulu egcwalisa le ndlu intle.
4.59 · Izimvo eziyi-71
Ifakwe kwindawo yokuhlala yaseCowra, iGadi yaseJapan edumileyo kunye neZiko leNkcubeko ikumgama wokuhamba, njengoko iyindawo yePikiniki edumileyo yaseBellevue Hill, iCowra Sculpture Park kunye neArboretum.
Izitshixo ziyafumaneka ukuze ziqokelelwe xa ufika kwi-carport ngasemva kwepropathi. Umnakekeli uya kuqhagamshelana nondwendwe ngaphambi kokufika kunye nendibaniselwano yesitshixo sokudityaniswa kwesitshixo.Inombolo yefowuni yoMkhathaleli wethu iyafumaneka endlwini, kodwa siyayihlonipha imfihlo yakho kwaye siya kukushiya ukonwabele ukuhlala kwakho ngaphandle kokuba sixabane nawe.
Izitshixo ziyafumaneka ukuze ziqokelelwe xa ufika kwi-carport ngasemva kwepropathi. Umnakekeli uya kuqhagamshelana nondwendwe ngaphambi kokufika kunye nendibaniselwano yesitshixo s…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-27630
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cowra